भाग्य परिवर्तन हुनका लागि छोरी नै जन्मिनु पर्दछ : ज्योतिष ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भाग्य परिवर्तन हुनका लागि छोरी नै जन्मिनु पर्दछ : ज्योतिष !
स्त्री हरुकाे स्वभाव र पुरुषहरुको भाग्य स्वयम् भगवान् लाई पनि थाहा हुदैन कहिले र कहाँ गएर परिवर्तन हुन्छ भनेर ।
मनिसकाे भाग्य तीन तरिकाबाट परिवर्तन हुन्छ भनेर ज्याेतिष तथा वस्तुशास्त्रका ठूलाठूला ग्रन्थ हरुमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
मान्छेकाे इच्छा अनुसार काम गर्ने बिरुवा लक्की बेम्बो, कुन दिशामा राख्ने ?
भाग्य र कर्मका साथै वास्तुशास्त्रमा पनि ध्यान दिदाँ सफलता हात पर्छ
कसैका राम्राे हुन्छ भने राम्राे हुने हरुकाे लागि सन्तान गर्भमा आएदेखि नराम्राे तथा धन सम्पत्ति नाेक्सान गर्ने तरिकाले आउने गर्छन् ।
शुभ तथा अशुभ भन्ने कुरा समयले जानकारी गराउने हाे ।
आध्यात्मिक कुरालाई हेर्ने हाे भने तीन ओटा दिमागकाे कुरा चर्चा गरिएकाे छ ।
भगवान् शिवकाे तीन अाेटा दिमाग खुलेकाे थियाे तसैले शिवलाई त्रिनेत्त्रम् भनेर पनि पुकारिने गरिन्छ ।
तेस्रो शक्ति या दिमाग खुल्नकाे लागि आम मानिसकाे बसमा छैन ।
ठूला ठूला ऋषि महर्षी हरुले ठूलाे तपस्या तथा याेगकाे माध्यम बाट मात्रै खुल्ने गर्दछ ।
जसकाे तेस्राे नेत्र यानि दाहिने दिमाग चल्छ तेस्ता मानिस हरुका लागि कुनैपनि कुरा असम्भव भन्ने हुदैन ।
आम मानिसकाे दाहिने दिमागकाे प्रयाेग एकदमै कम हुने गर्दछ जसकाे दाहिने दिमाग चल्छ तेस्ता मानिसहरू धेरै ने शक्तिशाली हुने गर्दछन ।
पुरुषको तुलनामा महिलाको दाहिने दिमाग केही धेरै चल्ने कुरा जानकार हरु बताउदै आएका छन ।
दाहिने दिमागदे निर्णय गर्ने गर्छ भने बायाँ दिमागले साेच्नेकाम मात्रै गर्ने गर्दछ ।
राम्राे समयमा निर्णय लिनु नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
रिजाल दक्षिण एसियाली ज्याेतिष महासंघ नेपालका महासचिव हुन ।
अमेरिकाबाट भाइरल जोडिको घर हेर्न आए ,यस्तो घर बन्यो ,सुत्ने कोठा यस्तो ( भिडियो सहित )
‘सिमसिमे पानीमा’ गीत ,अनुमति नलिएर कसैले गाए कारवाही गर्ने रेखा शाहको चेतावनी